တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်၌ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်ရှေ့တွင် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ ဖြင့်ကြိုဆိုသည်။ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူကြပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့အား လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တို့သည် အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသော တပ်မတော်အရာရှိကြီးများကို အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပေးကြသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် Sr. Lt. Gen. Nguyen Phuong Nam နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံစစ်သံမှူး Col. Nguyen Duc Giang တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထို့နောက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich သည် ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ကြသည်။ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကာလ ကြာရှည်သော မိတ်ဆွေရင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည်နှင့်အညီ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေးအတွက် တပ်မတော်အဆင့်မြင့်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေး၊ အရာရှိငယ်များ အပြန်အလှန်သွားရောက်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ရေး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သုတေသနပြုရေး၊ ဆေးကုသရေးတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အားကစားအဖွဲ့များ အပြန်အလှန် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များစေလွှတ်ရေး၊ ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက် ထောက်လှမ်းရေးသတင်းများ ဖလှယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအား နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် လုပ်ဆောင်ရေးတို့အား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်းက ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံသို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားရောက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ General Ngo Xuan Lich သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသို့ ယခုချစ်ကြည်ရေးခရီး လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဗီယကျနမျ ဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီးအား ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ဖွငျ့ကွိုဆို၊ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီး H.E. General Ngo Xuan Lich အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျရှတှေ့ငျ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ ဖွငျ့ကွိုဆိုသညျ။ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဗီယကျနမျနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးတို့သညျ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့၏ အလေးပွုခွငျးကိုခံယူကွပွီး ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့အား လိုကျလံကွညျ့ရှုစဈဆေးသညျ။ ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဗီယကျနမျနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီး တို့သညျ အခမျးအနားတကျရောကျလာကွသော တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားကို အပွနျအလှနျမိတျဆကျပေးကွသညျ။
အဆိုပါဂုဏျပွုကွိုဆိုပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး ဗီယကျနမျနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးနှငျ့အတူ ဒုတိယစဈဦးစီးခြုပျ Sr. Lt. Gen. Nguyen Phuong Nam နှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျ နိုငျငံစဈသံမှူး Col. Nguyen Duc Giang တို့ တကျရောကျကွသညျ။ထို့နောကျ ဗီယကျနမျနိုငျငံကာကှယျရေးဝနျကွီး H.E. General Ngo Xuan Lich သညျ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးစာအုပျတှငျ မှတျတမျးတငျလကျမှတျ ရေးထိုးပွီး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး ကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ နှဈနိုငျငံမိတျဖကျဆကျဆံရေးကာလ ကွာရှညျသော မိတျဆှရေငျးနိုငျငံမြားဖွဈသညျနှငျ့အညီ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှု နှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမွှငျ့တငျရေးအတှကျ တပျမတျောအဆငျ့မွငျ့ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျလညျပတျရေး၊ အရာရှိငယျမြား အပွနျအလှနျသှားရောကျ၍ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုမြား ပွုလုပျရေး၊ ဆေးဘကျဆိုငျရာ သုတသေနပွုရေး၊ ဆေးကုသရေးတို့တှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမွှငျ့တငျရေး၊ ယဉျကြေးမှုနှငျ့အားကစားအဖှဲ့မြား အပွနျအလှနျ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြားစလှေတျရေး၊ ဒသေတှငျးလုံခွုံရေးနှငျ့ အကွမျးဖကျမှု တားဆီးကာကှယျရေးအတှကျ ထောကျလှမျးရေးသတငျးမြား ဖလှယျရေး၊ ဆကျသှယျရေးကဏ်ဍအား နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ အရှိနျအဟုနျမွှငျ့တငျ လုပျဆောငျရေးတို့အား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ မတျလအတှငျးက ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံသို့ ကာကှယျရေးဝနျကွီး H.E. General Ngo Xuan Lich ၏ ဖိတျကွားခကျြအရ ခဈြကွညျရေးခရီးသှားရောကျခဲ့ပွီး အဆိုပါခရီးစဉျအတှငျး ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ၏ ဖိတျကွားခကျြအရ General Ngo Xuan Lich သညျ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံသို့ ယခုခဈြကွညျရေးခရီး လာရောကျခွငျးဖွဈပါသညျ။